လူသိများစာပိုဒ်တိုများ - သင်၏မူလအစနှင့်အဓိပ္ပါယ်
စကား | ဘာသာစကားထားသောစာပိုဒ်တိုများ
အဆိုပါ A နှင့်အို
"ကြက်သားနဲ့တူရယ်", "ပြွန်တွင်မတ်တပ်ရပ်", "တစ်နေ့မှာတော့ blaumachen" - ဤကျနော်တို့ကိုသူတို့ကလာဘယ်မှာတကယ်မသိဘဲ, နေ့စဉ်အသက်တာ၌သုံးပါသောသူအပေါင်းတို့သည်စာပိုဒ်တိုများဖြစ်ကြသည်။ တော့ဘူးဆိုတဲ့အသိကိုလုပ်မပေးပါဘူးကျနော်တို့ဖော်ပြချင်သောအရာကိုသိလူတိုင်းကနောက်ကွယ်ကအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်နိုင်ပေမယ့်သင်ဖန်ဆင်းခြင်း၏အစုကိုကြည့်ပါလျှင်တိကျစွာသူတို့များသောအားဖြင့်အလွန်ရယ်စရာသို့မဟုတ်ယနေ့ပေးပါ။
စကားများ - သင်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနှင့်ဇာစ်မြစ်
အတော်များများကစကားထူးရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်အချို့သောမွမ်းမံအသုံးပြုနိုင်တယ်။ သာသည်ဤခေတ်သစ်စကားထူးအများစုအားဖြင့်မသတ်မှတ်နဲ့ကျွန်တော်အမြဲပြန်မူလလဲကျသွားတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာများ၏ဇာစ်မြစ်ကိုကြည့်ဖို့အချိန်မယ့်လို့ပဲ။
စကားများအဘယ်သူ၏အစိတ်အပိုင်းများမဟုတ်ရင်ခြုံငုံရုပ်ပုံမရှိတော့မှန်ကန်သောကြောင့်အစားထိုးမရနိုငျစကားလုံးဖွဲ့စည်းပုံ fixed နေကြသည်။ အဘယ်သူမျှမကဤနားလည်နိုင်သည်ကအသိစေမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့၏ "ကောင်းကင်ပြာမုသာ၌ပိုင်," အဘယ်သူမျှမနိုင်ပါတယ် "ကောင်းကင်မုသားထံမှနီ" တို့ဖြစ်ကြသည်။
စာပိုဒ်တိုများကောင်းစွာဘာသာစကားမှာလူသိများနှင့်ထူထောင်ထားတဲ့ပုံဆောငျအသုံးအနှုန်းတွေရှိပါတယ်။ ဤသည်အခြားဘာသာစကားများဖြင့်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ကြောင်းကြောင်နဲ့ခွေး - သူကအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ "ကြောင်နဲ့ခွေးမိုးရွာ" နေစဉ်, ဒါကြောင့်အင်္ဂလန် "ကြောင်နဲ့ခွေး" ၌မိုးရွာ။ ဤတိုင်းပြည်များတွင်ကြှနျုပျတို့သညျဤနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး, အင်္ဂလန်အတွက်ပြန်ကြိုးဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပါ။
ကျနော်တို့အသုံးအများဆုံးစကားထူးပြုစုခြင်းနှင့်သူတို့အပျေါမှာ "သွားသလိုခံစားရတယ်" ပါပြီ။ ဒီနေရာတွင်ပင်တစ်ချိန်ကအသုံးအများဆုံးစာပိုဒ်တိုများဟာသူတို့ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းရှိသည်ဘယ်မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
"A ကောင်းဆုံးပညာရေး၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များရဲ့ start များအတွက် alpha နဲ့အိုမီဂါဖြစ်ပါတယ်" ဟု Frederik ရဲ့အဖွားပြောပါတယ်နှင့်သူမ၏မြေး၏ကျောင်းအဆင့်အပေါ်နေချိန်မှာစိုးရိမ်လှပါတယ်။ Frederik သူမကအတိအကျနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်တစ်နှစ်အစီရင်ခံစာတွင်ဘုန်းအသရေနှင့်အတူသူ့ဟာသူဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်သူတို့နောက်လာမည့်ခြောက်လအတွင်းပိုကောင်းနောက်တဖန်ဂရုစိုက်ကြလိမ့်မည်အကြောင်း, sheepishly တုံ့ပြန်မထားပါဘူးငါသိ၏။
အဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများ "ဒီအာလဖနှင့်အိုမီဂါ" ဘာမ
ထို့နောက်သူမသည်အခွံမာသီးများနှင့်သော့ခလောက်များအတွက်ပညာရေးဟာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်သူမ၏အဖွားကမေးတယ်။ အဖွားပြန်ကြား: "ဒါအစအဦးများနှင့်အဆုံးအဓိပ်ပာနေကြသည်။ သငျသညျကျောင်းအတွက်အစကတည်းကထံမှအနီးကပ်နားထောင်ရန်လျှင်, သင်အဆုံးမှာအကောင်းတစ်ဦးနိဂုံးချုပ်စေမည်နှငျ့သငျလိုခငျြသမြှကိုလေ့လာနိုငျသညျ။ "
နေ့လယ်စာပြီးနောက် Frederik ကျောင်းအဆင့်သူတို့၏မိဘများကိုပြသအိမ်မှာတတ်၏။ သူမသည်အဖွားသို့သော်အိုအဆုံးများအတွက်တစ်ဦးကစတင်ထားရှိပါတယ်အဘယ်ကြောင့်တဖန်ထင်၏။ ဖြစ်ကောင်းသူမ၏အဖွားကိုဖတ်မရနိုငျသို့မဟုတ်စနစ်တကျရေးမှတ်?
Frederik ရဲ့အမေကဒီကြေညာချက်မှာသူမ၏သမီးရယ်နှင့် said:
"ဒီဂရိအက္ခရာကနောက်ဆုံးအက္ခရာအဖြစ်ပထမဦးဆုံးအက္ခရာနှင့်အိုမီဂါအိုမီဂါအဖြစ်အာလဖများအတွက်တစ်ဦးရှိပါတယ်။ အဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများမာတင်လူသာတို့ကဘာသာပြန်ကျမ်းကနေလာပါတယ်။ အထဲတွင်, ဘုရားသခင် says: ဤစကားသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှ "ကျွန်မ ... အာလဖနှင့်အိုမီဂါ, အစနှင့်အဆုံးကိုဖြစ်ကြောင်းကို" ဟုမိခင်ကိုသိသို့မဟုတ်အစီရင်ခံရန်: "ဒါကဆိုသည်, သူတပြင်လုံးကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်ထားတဲ့အမြင်၌တစုံတခု၏အစအဦးများနှင့်အဆုံးရှိတယ်။ ထို့ကြောင့်အသိပညာ၏တန်ခိုးကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ "
Anke ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ သူမသည်သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်အခိုက်မှာရုပ်ရှင်မှသူမ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေနှင့်အတူယနေ့ချွတ်ဟုခေါ်တွင်သည့်ခဲ့ပါဘူး။ Stefan, Anke ရဲ့ကြီးမားတဲ့အစ်ကို, သူမ၏နှစျသိမျ့ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ "ထိုအခါသင်ကရုပ်ရှင်မနက်ဖြန်တက်သွားဒါကြောင့်မဆိုးဖြစ်၏။ "
အဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများ "ဒီအမှတ်" ဘာသနည်း
သို့သော် "မနက်ဖြန်ရုပ်ရှင်နေ့ကမဟုတ်ပါဘူးနှင့်ရုပ်ရှင်နှစ်ခုယူရိုကိုပိုမိုကုန်ကျပါလိမ့်မယ်။ မြေတပြင်လုံးအမှတ်ငါရှိသည်မဟုတ်အများကြီးအသုံးစရိတ်ပိုက်ဆံအဖြစ်ပါပဲ။ "
အဓိကအချက်ကဘာလဲ? merrily တက်ဆင်းနေတဲ့ပုဒ်ဖြတ်အမှတ်အသားအဖြစ် hops? ဒီတော့လျှင်အဘယ်ကြောင်းကြေညာချက်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိသနည်း
စာပိုဒ်တိုများ - တစ် brat အမျှတစ်တောငန်းငါ့ကို
တစ်ဦး blockhead ရှိခြင်း - စာပိုဒ်တိုများ
အံ့ဩအဆောက်အဦလုပ်ကွက် - စာပိုဒ်တိုများ
အင်္ဂလိပ်လိုဂျာမန်စာပိုဒ်တိုများ | denglisch ဟာသ